I-Expert De Semalt Yinikela Izigqibo ZOQEQESHO LOKUPHAKATHI KWI-Façon Yokuphucula Ukusebenza Kwendawo Yakho
En fact, kuninzi lwezinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe ngexesha lokudala isayithi lewebhu. De la structuration des pages à l'utilization of plugins specifications, all count for the recognition of your site kwi-intanethi. Ukudibanisa, kubaluleke kakhulu ukuthulula ukwaneliseka kubaxhasi bakho / iidisters - buy fake passport id cards and drivers license. Yonke into ingaba yindlela efanelekileyo yokuncedisa i-rules of optimisation des moteurs de recherche (SEO) ukukhupha i-sites configuration yewebhu. Xa ufumana iimfuno zokucinga, iWebhsayithi yakho ifumaneke ukulungelelanisa ukuhlawula kwiziphumo zophando.
Lo bunzima, apho apho ezininzi iinkampani zijongene nazo, kuba iinjongo zee-search zithuthukisa kwaye zitshintshile rhoqo zazo i-algorithmes, okungafunekiyo kunye ne-laboratories, okuyi-intanethi kunye ne-latest news dans le domaine du réferencement. I-Artem Abgarian, i-responsable de la réussite client client Semalt kuchaza ukuba unokuyilungisa njani ukuphucula ukusebenza kwendawo yakho.
Ukulungisa imifanekiso yesayithi
I-Saviez-vous ukuba yonke imifanekiso kwi-site yakho ingacwangciswa? Ewe, i-titre yakho enikezela kwi-image kunye ne-size de l'image can all reflect a good practice SEO. Uyakwazi ukuzenza umntu usebenzise imifanekiso, kwaye unikeze i-moteur de search engicale ngokutshintsha ngamnye umfanekiso. Xa i-moteurs de search ihamba ngeWebhu, iifoto zakho kwiWebhsayithi ziza kufakwa kwi-cadre ye ziphumo. Ukunciphisa iifayile zakho kukuvumela ukuba ufikelele kwi-Web, kwaye unokuphucula i-Web site yakho. Donnez à l'image un titre centré sur les mots clés enceda abaxumi ukuba bafune ngokuchanekileyo oko bafuna.
Susa iziqulatho zezinto eziphathekayo
U-Uvez-vous ukhe wachaza kwi-Webhsayithi ye-intanethi, uthele i-découver que vous devez umthengi ukuba uthumele indawo ye-accedder? Ewe, iindawo ezininzi ziphuma ezi ndawo kunye ne-retent never. Awufuni ukuba iWebhsayithi yakho ibe yinto leyo abantu abahamba ngayo ngaphambi kokuba babone le que vous offerrez! Ukuba unqwenela ukufaka iqhosha lakho kwi-site yakho, ungaxolisa kwi-subscribers, qhafaza kuphela le fayile. Iphepha le-Laisser la destination ukhululekile. Eliminez zonke iifom zezinto ezingenanto, kunye ne-détectteurs d'adverts, kunye neen fenêtres contextuelles..
Ii-moteurs de search zifuna iiWebhsayithi zize zifake i-content yazo rhoqo rhoqo ukuze zikwazi ukunikezela ngabasebenzisi beenkcukacha ezithembekileyo kunye nexesha elifanelekileyo. Njengokuba kunjalo, ii-Webhsayithi ezisebenzisayo ukubeka i-periodically to their content contents ziphambili kwi-algorithmes. I-Avoir ibhulogi iyindlela engapheliyo yokuqinisekisa ukuba iWebhsayithi yakho ayiyikukhuphela ngaphandle kokuqwalaselwa kwee-classements kunye ne-elelevés.
Khetha iibhloko ze-URL
Yenza i-moteur yokufuna i-URL ngokufanelekileyo ngokubandakanya iinkonzo ozenzayo kwi-URL okanye ngokukhetha igama elifanelekileyo ukuthululela i-URL yakho. Ukufakwa kweendawo okanye indawo ye-geographique yakho kwi-URL ingakwazi ukusixhasa ii-engines de search ku-client yakho kwi-Web site.
Ukulungiswa kwemisebenzi yeselula
Kwi-monde de plus plus endibeneyo, iGoogle ilahla ngokutsha i-algorithm ekhethekileyo yokuthungela ii-mobiles. Phala le nto, iWebhsayithi yakho kufuneka ifake i-mobile phones okanye risquer d'être pénalisé. I-web designer yakho kufuneka ibe ngumlinganiselo wokukhetha i-Web reactif adapté kwiifoni zefowuni. Ungayifuni ukubandakanya i-FAQ yecandelo le-FAQ ngokubhekiselele kulabo abathandayo ama-vocals vocals.
I-Attachez le vitesse yokutsala
Xa kukho konke okusemthethweni, qhafaza umsebenzi we-intanethi kwi-Web site. Iingqalelo zabantu abayifuni ixesha elide, kwaye ke ukuba i-site yakho ithathe ixesha elithile kwi-charger, le chances are que vous perdez uninzi kunye nabaxhasi abayifumanayo. Kungenzeka ukuba utsho ukuba yiyiphi iWebhsayithi yeWebhsayithi ayiyi kuguqula i-well as le le ifanele. Cinga konke okusemandleni akho okuza kukunciphisa indawo yakho, iiplagi ze-bouton ze-partage de médias sociaux, kunye nekiso lesithombe kwi-page yakho.
Nangona i-page egciniweyo kunye ne-conception ibalulekile, qhafaza ukuba i-réferencement est le factor et le ebalulekileyo ebangela impembelelo ye-site yakho. Ukuxhamla kwi-client experience Semalt , ukunyaniseka kwe-referencement dans votre pratique de travail kunokubangela ukuba ungasebenzi kwiinkampani zokuthengisa.